Yugyan Daily » म्यूजिक भिडियोः ‘फेसबुकमा महंगो प्रचार तर भ्यूजको हाहाकार’
२६ भदौ , २०७७
सर्वाधिक प्रचार गरिएका पछिल्ला केही गीतका अवस्था कस्तो छ, आउनुहोस् अब चर्चा गरौ
आफ्नो उत्पादनको प्रचार गर्न किन पाइदैन ? के म्यूजिक भिडियोलाई फेसबुकमा वुष्ट गर्नु गलत हो र ? बुष्ट गर्दैमा गीतको भ्यूज बढ्ने र ट्रेन्डिङमा आउँछ र ?
३.लज्जावती झार जस्तैः गायक महेश काफ्ले र गायिका अस्मिता अधिकारीको स्वरमा समावेश ‘लज्जावती झार’ बोलको गीत ४ दिन अगाडि सार्वजनिक भयो । यो गीत पनि सामाजिक संजाल फेसबुकमा सर्वाधिक प्रचार गरिएको गीतमा पर्छ।
फेसबुकमा पैसा खन्याएर प्रचार गरेपनि, गीत हेर्ने वा नहेर्ने अधिकार दर्शकमा हुन्छ । अर्कोतिर, गीत जबसम्म बारम्बार सुन्न सक्ने बन्दैन तबसम्म गीतले दर्शकको उल्लेख्य माया पाउँछ भन्ने सोच्नु पनि बेकार छ । तर, आफ्नो सामाग्रीलाई प्रचार गर्न पाइन्छ भन्ने अधिकार सबैसँग छ ।